Cayaarihii todobaadkan England Premiership - BBC Somali
Cayaarihii todobaadkan England Premiership
24 Jannaayo 2011
Tartanka kubadda cagta England Premiership hal cayaar oo kaliya ayaa la cayaaray shalay Axadii.
Waxay dhexmartay kooxaha Blackburn iyo West Brom.
Blakcburn waxaa horay ay liiska kala horaynta dhinaca dhibcaha kaga jirtay tobanka koox ee hoose, balse hadda oo ay badisay ayay noqonaysaa kooxda 7-aad.
West Brom ayaase wali ka mid ah toban koox ee hoose iyadoo ah kooxda 15-aad liiska labaatanka koox ku jiraan.
Blackburn 2-0 ayay kaga badisay kooxda West Brom.
Waxaa goolka koowaad uu Blackburn u dhashay qaybtii hore oo afar daqiiqo ka dhiman tahay, waa daqiiqadii 41-aad markii kubadda uu soo karoosay cayaaryahan u dheelayay Blackburn, ayaa difaaca kooxda West Brom cayaaryahanka Tamas oo is lahaa madaxa ku bixi uu shabaqa dhinaca kore ee bidixda ka dhigay, ciyaartuna noqonta 1-0 ay kooxda Blackburn ku hogaaminayso.
Isla markii qaybtii labaad ee cayaarta la isugu soo laabtay ayaa cayaaryahanka Hoilett uu cayaarta oo labada daqiiqo oo kaliya socota uu gool labaad ka dhaliyay kooxda West Brom, oo cayaartu noqotay 2-0 ay ku hogaaminayso Blackburn.
West Brom dadaallo badan ayay samaysay ay ku doonayso in ay goolasha isaga soo guddo balse uma suurtagalin. Fursaddo dhowr ah oo gool noqon karay oo ay ku jireen kuwo uu abuuray cayaaryahanka West Brom Thomas waxaa ka hor istaagay shabaqa, in kubaddu gasho iska daayee in xitaa ay u dhowaato, goolhaye Robinson.
Kooxda Blackburn, waxay sidaas ku yeelanaysaa 31 dhibcood, waxayna hadda gashay booska 7-aad dhinaca dhibcaha oo waxaa ka sareeya Sunderland oo shalay Blackpool 2-1 kaga soo badisay 37 dhibcood leh, waxaa kooxda shanaad ah Tottenham oo shalay ay barbarro galeen kooxda Newcastle oo 38 leh waxayna iska qasaarisay furad ay kaga kormarikartay kooxda Chelsea oo 38 leh, oo habeen dambe la cayaaraysa kooxda Bolton oo ay garoonkooda ku booqanayaan.
Chelsea cayaarteedii ugu dambaysay 2-0 ayay kaga adkaatay kooxda Blackburn kadib cayaaro xiriir ah oo ay ka keeni waysay guulo la taaban karo. Kooxaha horay uga soo badiyay waxaa ka mid ahaa kooxda Wolves oo ah labaad ee ugu hooseysa liiska oo West Ham oo kaliya ay ka hoosayso. Waxaa hadda la is waydiinayaa Chelsea ma ka soo kabsatay natiijadii xumadii xilliyadii u dambeeyay.
Image caption Van Persie
Natiijooyin kala duwan ayay kooxuhu ka keensadeen cayaarihii dhacay maalintii Sabtida.
Kooxda Arsenal waxay sadex iyo eber kaga kadaatay kooxda Wigan. Waxaa sadexda goolba u dhaliyay Van Persie.
Manchester City 1-0 waxaa kaga badiyay Aston Villa. Aston Villa waxaa goolka u dhaliya Darren Bent oo dhowaan kooxda ku soo biiray. Muran badan ayaa ka dhex taagnaa taageerayaasha kooxda Aston Villa oo ahaa in uu u qalmo ilaa 24 million oo gini oo uu ka bixiyay tababare Gerard Houllier.
Waa cayaartii ugu horaysay ee Bent uu u safto kooxda, gool ayuuna keenay, kaasoo uu kubadda uu soo celiyay goolhayaha kooxda Manchesty City oo uu ka gaarsiiyay shabaqa kadib ka faa'iidaystay fursadda.
Kooxda Manchester United oo hogaanka haysa, isla markaana cayaaraheedii ugu dambeeyay aad loo dhaliilay inkastoo aan ilaa hadda laga badin sidii tartanku u bilowday, ayaa si xoog leh ugu barbartay kooxda Birmingham. Sadex gool waxaa dhaliyay Berbatove, iyadoo Giggis iyo Nani ay kala dhaliyeen labada gool ee kale.
Fulham waxay 2-0 kaga badisay Stoke.
Everton iyo West Ham 2-2 ayay isla dhaafi waayeen. Kooxda West Ham waxaa dib uga soo muuqday garoonka tababare Avram Grant oo horay u muujiyay dhamaadkii cayaartii tan ka horaysay markii uu taageerayaasha si niyad ah u sagootiyay garoonka gudihiisa in ay uga dhamaatay kooxda. Waxaa la hadal yahay in tababar Martin O'neil uu iman doono West Ham. Hase yeeshee, waxaa baxaya in kadib markii uu diiday Martin O'neil in uu jagadan qaato in loo ogolaaday Avram Grant in uu sii wado tababarenimada kooxda West Ham.
Newcastle iyo Tottenham ayaa iyaguna ku kala baxay 1-1. Tottenham daqiiqadihii ugu dambeeyay ee waqtiga dheeraadka ayaa Lennon uu goolka barbardhaca ah u dhaliyay.
Kooxda Liverpool 3-0 ayay dirtay kooxda Wolverhampton. Poulsen,Torres iyo Meireles ayaa sadexda gool Liverpool u kala dhaliyay.
Kooxda Sunderland waxay 2-1 ku tuntay kooxda Blackpool.
Manchester United ayaa 48 dhibcoo dku horkacaysa dhinaca dhibcaha 20-ka koox ee ku tartamaya England Premiership, waxayn cayaarta 22 ka mid ah 38 cayaareed ee tartanka koox walba ay laba jeer la kulmayso kooxaha kale.
Arsenal ayaa ah kooxda labaad oo laba dhibic ka hoosaysa Man U, waxayna leedahay 46 dhibcood iyadoo 23 kulan cayaartay.
Manchester City oo kooxda sadexaad ah waxay leedahay 45, blasé 24 kulan ayay dheeshay.
Chelsea ayaa ah kooxda 4-aad oo waxay iyada iyo Tottenham oo kooxda shanaad ah dhinaca dhibcaha ay wada leeyihiin min 38 dhibcood.
Kooxda West Ham ayaa kooxaha oo dhan ugu hoosaysa dhibco ahaan ooleh 21, waxay isku dhibco yihiin wolves oo 21 leh, goolasha lagu leeyahay West Ham ayaa ka badan kuwa Wolves lagu leeyahay. Wigan ayaa ah kooxda sadexaad ee ugu hoosaysa. Kooxaha West Brom, Aston Villa iyo Birmingham ayaan kooxaha wax badan ka fogayn dhinaca dhibcaha la kala horeeyo.
Chelsea habeen dambe ayay la cayaaraysaa Bolton. Tallaadada Blackpool ayaa martigalinaysa kooxda Manchester United. Wiganna waxay la cayaaraysaa Aston Villa. Livperpool waxaa arbacada u soo martin doona kooxda Fulham.